फाल्गुन १७, २०७७, १२:०४ PM
धनगढी : कैलालीको हसुलियामा सम्पन्न थरुहट थारुवाट राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न १५ वटा कारणसहित विद्रोहको घोषणा गरेको छ । आइतबार राती सम्पन्न सम्मेलनले आफ्ना माग पूरा गर्न विद्रोहको घोषणा गरेको जनाएको छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि संघर्षरत थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन १५ र १६ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाकाे हसुलियामा सम्पन्न भएको हो । हसुलिया सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत १५ बुदे अवधारणापत्र’ जारी गर्दै मोर्चाले विद्रोहको घोषणा गरेको छ ।
मोर्चाले विद्रोहमा जानुको १५ कारण उल्लेख गरेको छ । मोर्चाले थारु बाहुल्य भूगोल समेटेर प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने, टीकापुर घटना राजनीतिक रुपमा सम्बाेधन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो। सो घटना घटना मुद्दामा सांसद रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ताहरु जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
विद्रोहका १५ कारण यस्ता छन्
३. हिंसा, डर, त्रास, धाक, धम्की आतङ्क, चन्दा असुली, लुटपात नगरी सभ्य शालिन भद्र तवरबाट अधिकार प्राप्ती र स्थायी शान्तिका लागि शान्तिपूर्ण विद्रोह हुनेछ ।
११. विद्यमान, वेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन विरुद्व हाम्रो विद्रोह हुनेछ ।
१३. बालुवाटार र सिंहदरवारले हामी माथि गरेको औपनिवेसिकताका विरुद्व हाम्रो विद्रोह हुनेछ ।
१४.धर्तीपुत्र थारुलगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिमहरुको परम्परागत एवं प्रथाजनित मूूल्य मान्यता (बरघर भलमन्सा मटाँवा) लाई संवैधानिक एवं कानुनी मान्यता दिलाउन हाम्रो विद्रोह हुनेछ ।
Tags: थहरुहट मोर्चा